ကိုဗစ် ကိုကိုယ်တိုင်မျက်ဝါးထင်ထင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ပြောပြလာခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ကျော်ကျော်… – Cele Oscar
ပရိတျသတျကွီးရေ ကြျောကြျော ရဲ့ နာမညျအရငျးကတော့ ကြျောနိုငျဦးပါ။သူရဲ့ အနုပညာလောကမှာ တော့မငျးသား ကြျောကြျော ဆိုပွီးလူသိမြားပါတယျ။ကြျောကြျောက ဇာတျလမျးတှထေဲမှာ ခေါငျဆောငျ မငျးသားတဈယောကျအနေ နဲ့ တောငျပါဝငျခဲ့တဲ့သူပါ။ခုထိလဲ အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျနဆေဲပါပဲ။
ကြျောကြျောက သူရဲ့သူငယျခငျြး ဖွဈတဲ့ညီထှဋျခေါငျ နဲ့ ဆုမွတျနိုးဦး တို့အမွဲတှရေ့တတျပါတယျ၊သူတို့သူငယျခငျြးတှေ ကတကယျကို အခှီးတဈလိုငျးတှပေါနျော။ဟာသတှေ နဲ့ အမွဲနောကျနတေတျတဲ့ အဖှဲ့ပါပဲ။ခုကြျောကြျောက သူခုလိုပွောရတာနောကျကနြပေါပွီ သို့ပမေယျ့ ကိုယျတိုငျမကျြဝါးထငျကွုံတှခေဲ့ရလို့ခုခြိနျမှပွောရတာပါဆိုပွီး ပွညျသူတှေ ကို အသိပေးလာပါတယျ။
“ဒီစာကို ခု မှရေးနိုငျတာကလဲ အဖွဈအပကျြတှကေိုမကျြ ဝါးထငျထငျမွငျတှရေ့ပီး မှ သိလာတဲ့အသိမို့ပါ ဒါပမေယျ့အခြိနျကတော့နှောငျးနပေါပီတကယျတော့ကနြျောတို့တှဟော ကွိုတငျကာကှယျမှု့မှာ အရမျးအား နညျးခဲ့ကွပါတယျ။နိုငျငံရေး ရိုကျခတျမူတှေ ပွငျးထနျနတောကို အခှငျ့ကောငျးယူပီး ကိုဗဈ ကတော့ချေါလို့ရသလောကျချေါမှာပဲ ဒါကွောငျ့ဘယျသူမှ အားကိုးလို့ မရတဲ့ခုလိုအခိုကျအတနျ့မှာ မိမိကိုယျသာ အားကိုးရာဆိုတဲ့ အသိသတိ နဲ့ ဖွတျကြျောပီး မသအေောငျနကွေရငျးကိုယျဖွဈခငျြတဲ့ပနျးတိုငျ တှကေို ရောကျအောငျ လြှောကျကွရအောငျဗြာ”ဆိုပွီးပေါ့ဆမိခဲ့ကွတဲ့ သူတဈခြို့အတှက အသိပေးလာပါတယျ။အားလုံးပဲအတူတကှတိုကျထုတျကွရငျ အောငျနိုငျကွမှာပါ။ပရိတျသတျကွီး ဆငျခွငျနိုငျအောငျ တငျဆကျပေးလိုကျရပါတယျ. ။ ဖတျရှု့ပေးသူတဈယောကျခငျြးစီ တိုငျးကို
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ကျော်ကျော် ရဲ့ နာမည်အရင်းကတော့ ကျော်နိုင်ဦးပါ။သူရဲ့ အနုပညာလောကမှာ တော့မင်းသား ကျော်ကျော် ဆိုပြီးလူသိများပါတယ်။ကျော်ကျော်က ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ ခေါင်ဆောင် မင်းသားတစ်ယောက်အနေ နဲ့ တောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ခုထိလဲ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်နေဆဲပါပဲ။
ကျော်ကျော်က သူရဲ့သူငယ်ချင်း ဖြစ်တဲ့ညီထွဋ်ခေါင် နဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး တို့အမြဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်၊သူတို့သူငယ်ချင်းတွေ ကတကယ်ကို အခွီးတစ်လိုင်းတွေပါနော်။ဟာသတွေ နဲ့ အမြဲနောက်နေတတ်တဲ့ အဖွဲ့ပါပဲ။ခုကျော်ကျော်က သူခုလိုပြောရတာနောက်ကျနေပါပြီ သို့ပေမယ့် ကိုယ်တိုင်မျက်ဝါးထင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့ခုချိန်မှပြောရတာပါဆိုပြီး ပြည်သူတွေ ကို အသိပေးလာပါတယ်။
“ဒီစာကို ခု မှရေးနိုင်တာကလဲ အဖြစ်အပျက်တွေကိုမျက် ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ရပီး မှ သိလာတဲ့အသိမို့ပါ ဒါပေမယ့်အချိန်ကတော့နှောင်းနေပါပီတကယ်တော့ကျနော်တို့တွေဟာ ကြိုတင်ကာကွယ်မှု့မှာ အရမ်းအား နည်းခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံရေး ရိုက်ခတ်မူတွေ ပြင်းထန်နေတာကို အခွင့်ကောင်းယူပီး ကိုဗစ် ကတော့ခေါ်လို့ရသလောက်ခေါ်မှာပဲ ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှ အားကိုးလို့ မရတဲ့ခုလိုအခိုက်အတန့်မှာ မိမိကိုယ်သာ အားကိုးရာဆိုတဲ့ အသိသတိ နဲ့ ဖြတ်ကျော်ပီး မသေအောင်နေကြရင်းကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ပန်းတိုင် တွေကို ရောက်အောင် လျှောက်ကြရအောင်ဗျာ”ဆိုပြီးပေါ့ဆမိခဲ့ကြတဲ့ သူတစ်ချို့အတွက အသိပေးလာပါတယ်။အားလုံးပဲအတူတကွတိုက်ထုတ်ကြရင် အောင်နိုင်ကြမှာပါ။ပရိတ်သတ်ကြီး ဆင်ခြင်နိုင်အောင် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်. ။ ဖတ်ရှု့ပေးသူတစ်ယောက်ချင်းစီ တိုင်းကို